IiNdumiso Chapter38 1 Umhobe kaDavide:eyokukhumbuza. Yehova, musa ukundohlwaya unoburhalarhume, Ungandithethisi unobushushu: 2 Ngokuba iintolo zakho zitshone kum, Sehla kanzima kum isandla sakho. 3 Akukho ndawo iphilileyo enyameni yam, ngenxa yokubhavuma kwakho; Akukho kuphila emathanjeni am, ngenxa yezono zam. 4 Ngokuba ubugwenxa bam bugqithile entlokweni yam, Bundisinda njengomthwalo onzima. 5 Iyanuka, iyabhiqiza imivumbo yam, Ngenxa yokumatha kwam. 6 Ndiyapenapena, ndisibekeke kakhulu; Yonke imini ndihamba-hamba ngezimnyama zokuzila. 7 Ngokuba kuyatshisa emihlubulweni yam, Akukho ndawo iphilileyo enyameni yam. 8 Ndiqobekile, ndityumkile kakhulu; Ndibhongiswa kukugcuma kwentliziyo yam. 9 Nkosi yam, uphambi kwakho wonke umnqweno wam, Nokuncwina kwam akusithele kuwe. 10 Iphaphu lam liyabetha, ndiphelelwe ngamandla; Ukukhanya kwamehlo am, nako oko, akukho kum. 11 Abandithandayo nowethu bamele mgama ekubethweni kwam, Nezalamane zam zimi kude. 12 Bandithiyele abafuna umphefumlo wam; Abangxamele ukuba ndihlelwe bububi bathetha izinto zokweyelisela, Bacamanga inkohliso imini yonke. 13 Ke mna ndinjengesithulu, andiva; Njengesidenge esingawuvuliyo umlomo waso. 14 Ndinjengomntu ongeva nto, Omlomo ungenakuthethisa. 15 Ngokuba ndilindele kuwe, Yehova; Kuya kuphendula wena, Nkosi yam, Thixo wam, 16 Ngokuba ndithi, Hleze bandivuyelele Bona abo bangazikhulisayo kum ekutyibilikeni konyawo lwam. 17 Ngokuba ndihlalele ukujingxela, Umvandedwa wam uphambi kwam amaxesha onke. 18 Ngokuba ndiya kubuxela ubugwenxa bam; Ndinesithukuthezi ngenxa yesono sam. 19 Ke zona iintshaba zam ziphilile, ziziimfidi; Baninzi abandithiyileyo bexoka; 20 Abandibuyekeza ngobubi esikhundleni sokulungileyo Bayandichasa, ngenxa yokuphuthuma kwam okulungileyo. 21 Musa ukundishiya, Yehova; Thixo wam, musa ukuba kude nam. 22 Khawuleza undincede, Nkosi yam, Msindisi wam. [ Prev ]